သိရင်ပြောပေးကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » သိရင်ပြောပေးကြပါ
Posted by ေကာင္းျမတ္သူ on Feb 6, 2012 in Ideas & Plans | 12 comments
ကျွန်တော့်မိဘတွေက ဝန်ထမ်းတွေဗျ… အတိအကျပြောဆိုရင်တော့ ဆရာ၊ ဆရာမလုပ်တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် မွေးချင်းက (၃) ယောက်၊ ကျွန်တော်ကအလယ်လူ။ တစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်နဲ့မွေးလိုက်တဲ့ အဖေနဲ့အမေကြောင့် ကျွန်တော့်တို့မိသားစု ကသီတယ်။ လစာထုတ်ရက်ဆိုရင် အဖေက အမေကိုလခအပ်တယ်။ အမေကကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်ကိုခေါ်ပြီး မိသားစု စာရင်းရှင်းတမ်းဖွင့်တယ်။ ဒီလကုန်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်က သားကြီး မင်းဖျားတုန်းက အမေ အမေ့သူငယ်ချင်း ဆီကယူထားတာ ဆပ်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်လောက်က စားစရိတ်ကုန်တယ်။ ဒီလဘယ်လောက်ရတယ်ပေါ့ စသည့်ဖြင့် လတိုင်းရှင်းတယ်။ အဲဒိတုန်းက အမေရှင်းပြတာတဲ့ ပမာဏတွေ ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး၊ ခေါ်ပြောရင်နားထောင်တယ်ပေါ့။ ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျောင်းမုန့်ဈေးတန်းမှာ မုန့်ကိုယ်စီဝယ်စားကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်အထက်အစ်ကိုက အမေကို မုန့်ဖိုးစတောင်းတယ်။ အမေက ကျွန်တော်တို့ (၃)ယောက်စလုံးကိုမေးတယ်။ ငါ့သားတွေ သူများကျောင်းမှာမုန့်စားလို့ စားချင်ကြလားတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း စားချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒိတော့အမေက “အမေတို့က ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ သားတို့ကို သူများလိုမုန့်ဖိုးတော့မပေးနိုင်သေးဘူးတဲ့။ သားတို့ကလည်းစားချင်တယ်ဆိုတော့ အမေကျောင်းကို မုန့်ထည့်ပေးမယ်။ သူများစားတာတော့ သွားမမျှော်နဲ့ ”ဆိုပြီး နောက်နေ့ကစ မုန့်ထည့်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူများနည်းတူစားရတော့မပြောတော့ပါဘူး။ အမေကတော့ရှင်းပြတယ်။ သားရဲ့ကျောင်းမှာရောင်းတာလဲ ဒီမုန့်ပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အမေက သားတို့သုံးယောက်ဆိုတော့ မုန့်ကိုအတွဲလိုက်ဝယ်ရင် ပိုဈေးသက်သက်သာသာရတယ်။ တစ်ခါဝယ်ရင် တစ်ခုစာလောက်သက်သာတယ်။ သုံးခေါက်လောက်ဝယ်ရင် သားတို့အတွက် တစ်ရက်ဖိုး အမေတို့သက်သာတယ်။ တစ်ရက်ဖိုးပိုရတော့ သားတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဒိပြင်အရာတွေ ဝယ်ဖို့ဆုထားနိုင်တာပေါတဲ့။ ကျွန်တော်တို့မိသားစု လခပေါ်မှာပဲ သုံးနေရတော့အပြင်အကြွေးဘယ်ကင်းပါ့မလဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးကိုတော့ ပညာရေး ပြည့်ပြည့်ဝဝပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့အမေကို အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်မိတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်လာတော့ အဖေက မင်းတို့ဝန်ထမ်းမလုပ်ကြနဲ့တဲ့။ အပြင်စီးပွားရေးကို နံမည်တစ်ခုယူပြီး အဲဒီနံမည်နဲ့မင်းတို့တစ်သက်လုပ်စား၊ မင်းတို့သားသမီးကို ကျန်တာအမွေမပေးနိုင်ရင်တောင် အဲဒီနံမည်ကို အမွေပေးဆက်လုပ်စားပါစေတဲ့။ နံမည်မပြောင်းခိုင်းနဲ့တဲ့။ မင်းတို့သားသမီးတွေ အဲဒိအမွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် မင်းတို့ သင်ပေးခဲ့တဲ့။ အဖေဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ အဖေဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ရွာသူရွာသားတွေ သိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပေးပါ။
Categories မခွဲတတ်တော့လို့ Ideas & Plans ထဲထည့်လိုက်တယ်။ မှားခဲ့ရင် အကြံပေးကြပါအုံးဗျာ
အဲတော့ နာမည်တစ်ခုနဲ့ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဗျာ
စီးပွားရေးလောကမှာ နာမည်တစ်ခုရသွားရင် အိုကေပြီ
နောက်ပိုင်း နာမည်အရှိန်နဲ့ဆက်မျှောသွားလို ့ရပြီ
သားသမီးတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန် သွန်သင်ပြနိုင်တာ
အဲဒီအမွေကိုတော့ ကလေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပါနော် …
ကို ကောင်းမြတ်သူ တို့ကို သခင် ဖြစ်စေချင်လို့ ဖြစ်မှာပါ…..
ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့သူ ရဲ့ သား ဖြစ်ရတာ ကံ ကောင်းလှပါတယ်…
ဘော်ဘော်ပေါက်ပြောတဲ့ “ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အခါ လခနဲမယ်
သမာဓိမခိုင်ရင် အကျင့်ပျက်မယ်” ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဗျာ။
ကိုမိုးဇက်ရေ………အမေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေက ဝင်ငွေထိန်းသိမ်းနည်းနဲ့ သုံးစွဲနည်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဝင်ငွေရှာတဲ့နည်းလေးများ ရှိရင်ကူညီကြပါအုံးဗျာ… ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တာ မကြာသေးလို့ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်သေးပါ။ ဘယ်လိုပြုကျင့်နေထိုင်နည်းလေးရှိရင် သင်ပေးကြပါအုံးဗျာ
ကိုချစ်ရင်ထူးရေ……. ကျွန်တော်က ဆရာ/မအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ကြီးရတာဗျ။ အစ်ကိုပြောသလို ကံကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ငယ်ငယ်တုံးကတော့အဘပြောတဲ့စကားကို ကြိုက်ခဲ့တယ်။ ငါ့သားသမီးတွေနဲ့ ငါ့မိန်းမက ဆရာ/မတွေဆိုတော့ မင်းတို့(၃)ယောက်နဲ့ ငါနဲ့ကတပည့်ပေါ့လို့ပြောပြီး ရယ်တယ်ဗျ။
အပေါ်က ကိုမိုးဇက် ပြောသလို ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွေလေးတွေ သားသမီးအပေါ် လက်ဆင့်ကမ်းဖို ့လဲ မမေ့နဲ ့ပေါ့ဗျာ
အမယ်လေးနော် ဒီနာမည်နဲ့တော့ ဖြေရှင်းရတာမောလာပြီ
Moe Z က မိန်းကလေးပါဗျ အဲ ချင့်
ကွန်လေးနေတဲ့ကြားတဲ့က ဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲဗျာ….
မာမီပေါက်ရေ မိုးဇက်က မိန်းမတဲ့ဗျ။ သများတော့ယုံဘူး. ဟုတ်မဟုတ်တွားကြည့်ပြီး ကျောစမ်းပါအုံးဗျ… နောက်တာနော် မိုးဇက်။ ကပေါက်ဖော်လာရင်တော့ ကျုပ်ကျက်လိလိုက်ဗျာ.
”အပြင်စီးပွားရေးကို နံမည်တစ်ခုယူပြီး အဲဒီနံမည်နဲ့မင်းတို့တစ်သက်လုပ်စား၊ မင်းတို့သားသမီးကို ကျန်တာအမွေမပေးနိုင်ရင်တောင် အဲဒီနံမည်ကို အမွေပေးဆက်လုပ်စားပါစေတဲ့။ နံမည်မပြောင်းခိုင်းနဲ့တဲ့။”
မှန်ပါတယ်။ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ လုပ်နိုင်ရင်ပေါ့။ ဥပမာ- လူပျံတော်ပတ္တမြားတို့၊ ကြက်လျှာစွန်း ဒန်ပေါက်တို့၊ ဦးလှမြင့်သင်္ဘောသားအကျီ င်္ချုပ်ဆိုင်တို့ လိုသားစဉ်မြေးဆက်လုပ်လာနိုင်တာကိုဆိုလို တာဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်ဘာပဲလုပ်နိုင်လုပ်နိုင် ပေါ့လေ။ မိသားစုတောက်လျှောက်အမွေဆက်ခံလို့ရမဲ့အလုပ် မျိုးပေါ့။ အခုခေတ်ဆို YKKO လိုမျိုးပေါ့။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေါ့။ ဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့ အစိုးရဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လခကပုံသေပဲလေ။ တိုးတက်မှု့ကွာတာပေါ့။
ကျွန်တော့ အထင်တော့ မျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုထင်ပါရဲ့..လွတ်ထွက်အောင်မရုံးနိုင်သေးဘူး…